China Wholesale Vatengesi Tsika Yakavanzika Label Eyelash Extensions fekitori uye vagadziri | Weiti
Vatengesi Vakawanda Tsika Yakasarudzika Chinyorwa Eyelash Kuwedzeredzwa
1, Faux mink eyelash yekuwedzera
2, Ukobvu 0.03 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.10 / 0.12 / 0.15 / 0.18 / 0.20 / 0.25mm
3, Curl J / B / C / CC / D / D + / L.
4, Yakakwira mhando yezvinhu uye kugadzikana kwehunyanzvi
Semuenzaniso odha inowanikwa.
Yakavanzika Label inowanikwa. Isu tinobvuma OEM & ODM sevhisi.
Yakakwira mhando yezvinhu uye kugadzikana kwehunyanzvi, iro bvudzi harina kunamira uye hapana masara, nyore kubvisa, nyore kushandisa, rakaringana curl & kureba. Maawa makumi maviri nemana mushure mekutengesa
0.05m uye 0.07mm ukobvu ndiyo yakanyanya kutaurwa vhoriyamu maronda, iwe unogona kuisa kusvika 3 ~ 10 kurova kumwechete pane imwe yakasikwa lash pasina kukuvadza iyo yakasarudzika lash.
Rudzi urwu runomakwa chete pa1 / 3 yekupedzisira yekuwedzera, ichiita kuti muviri unorwadza uzere uye unoshamisa.
lt ine mukana wakanaka wekuchinja. simba rakasimba uye kufema. lt yakareruka uye yakapfava.
Sezvo rakagadzirwa nefakisi mink, iri risingaremi uye rinopa rakachena dema. Kutenda pasina kupenya, inopa kutaridzika kwakawanda.
Eyelash extensions inowedzera kureba, ukobvu, curl uye kuzara kune echisikigo maronda, inowedzera kusimudza uye chimiro cheziso. Ivo vari ega anoiswa kune hwaro hwega hwega kuputika ne glue.
Main ficha: Yakafanogadzirwa fan fan eyelashes inobatsira kumhanyisa maitiro eyelashes. Nekuti iwe haufanire kuita eyelash fan nemaoko. Iyi fan inokombama inoshandisa kubatisisa, haina mapfundo, uye ine pfupi pfupi uye yakatetepa hwaro iyo isingazokuvadza eyelashes echisikigo.
Nezve ukobvu: Vamwe eyelash artists vanoti 0.05mm uye 0.07mm dzakatetepa zvekushandisa. Nekudaro, iwo akapfava uye echisikigo. Havana kuomarara. Vamwe vanhu vanoti 0.10mm yakatetepa, uye vamwe vanhu vanoti 0.10mm iri gobvu asi yakaoma kwazvo. Muchokwadi, yega yega mhando eyelashes ine zvayakanakira yayo. Eyelash tekinoroji inogona kusarudza eyelashes zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Prefabricated mafeni anokwanisa zvakare kushandiswa neakasarudzika mafeni kugadzira hybrid mapakeji.
Chinangwa: Yakakwana eyelashes. Aya eyelashes enhema anonyanya kushandiswa ne eyelash artists, nezvimwe zvishandiso zvekuwedzera eyelashes, senge zvigezi, giredhi rekurapa gundi, ziso gel pads, eyelash primer, mascara matanda, nezvimwe. Isa kune eyelash imwe panguva.
Chinyorwa: Aya eyelashes akagadzirwa neye nhema PBT, polybutylene terephthalate, iyo yakasimba se polyester, uye inogona kumira yakanyanya tembiricha uye dzakasiyana siyana solvents (kirimu kana yekuchenesa). Iwo akapfava uye akareruka, kungofanana neyako eyelashes. Uye zvakare, icho chinhu chakatipoteredza chine hushamwari.
Pashure: Yakavanzika Label Magnetic Nhema Eyelashes Ine Magnetic Eyeliner
Zvadaro: Gadzirisa Yakavanzika Label Yemunhu Classical Faux Mink Eyelash Extensions
Kushandisa Eyelashes Dzenhema
Eyelash Extension Vatengesi
yakavanzika chitaridzi eyelash yekuwedzera
Gadzirisa Yakavanzika Label Mumwe Classical Fa ...
mink lashes, Ziso Lashes, Eyelash Kuwedzeredzwa, Vatengesi ve Eyelash, lipgloss, eyeliner,